Ukubhukuda kahle kuthinta isimo sengqondo nempilo. Imisipha etholakalayo ngokweqile emanzini iphumula, umzimba uyaba lula. Kuthatha ukugeza okushisayo, ukucindezeleka kanye nokuphazamiseka kwemizwa kuphazamiseka, ama-pores awandisa, ukujikeleza kwegazi kuthuthuka.
Ukushisa kwamanzi ebhodini akufanele kudlule ama-37-38 degrees, ngaphandle kwalokho amanzi ashisayo kakhulu angakusiza. Ukugeza okufanele kufanele kuthathwe ngaphambi kokudla noma amahora amabili emva kokudla. Inqubo yamanzi akumele iphuze kakhulu, ngisho noma uzizwa kahle ngesikhathi esifanayo. Emanzini akufanele kube ngaphezu kwemizuzu engu-20-25, ngoba ingandisa umthwalo enhliziyweni, kuyoba ngcono uma amanzi ekugezeni engagubha indawo yenhliziyo yakho.
Kuwusizo ukugcoba umzimba, ukuhambisa ebhodini. Ungathathi amanzi okugeza nsuku zonke, ngoba emanzini afudumele isikhumba sikhukhula, soma futhi amafutha amanengi alahlekile. Kungcono ukugeza zonke izinsuku ezingu-2-3. Ngendlela elandelayo, gubha ithawula ngemuva kokugeza, usula umzimba ngekhilimu lomzimba wezithombeni bese uphumule.
Kodwa ukuze ibhuku likulethela injabulo futhi lizuze, udinga ukwazi ukuthi yini okudingeka uyengeze emanzini. Kunamabhati amaningi ahlukene angasiza ekuhloleni izenzakalo ezihlukahlukene zokuphila, kusize umzimba ukuthi ubhekane nezifo ezihlukahlukene, ukukhathala nokucindezeleka.
Bath ngaphambi kosuku.
Uma uhamba ngosuku, hlanza ne-ginseng, ngenxa yalokho isikhumba sizoba silky. Ibhati nama-rose petals angashiya iphunga elimnandi nelinen. Isibonelo, ngenkathi uCleopatra egeza ngamapulangwe ama-rose, wayekholelwa ukuthi ukugeza ngamapulumu ama-rose kwakuzogcina ubuhle nobusha bakhe.
Bath emva komsebenzi.
Uma uzizwa ukhathele ngemuva komsebenzi wosuku, ukugeza okuqinisayo kuzokusiza. Ngokukhathala okusheshayo nokukhathala okungapheli, okugeza, lapho ungakwengeza khona amafutha omuthi wetiyi, kuzokusiza, ama-drople 5-6 kuphela azosiza ukukhululeka ukukhathala. Ibhati ne-pine extract yenza ngcono ukulala, kukhulula ukuphazamiseka kokukhathazeka nokukhathala, futhi kunciphisa isikhumba. Uma uzizwa ubuhlungu be-muscle, hlela lezi zindawo.
Kukhona isimo esinjalo: njengezandla zehla, akukho ukukhathala, kodwa awufuni ukwenza lutho. Thatha i-apula lokugeza ngokushesha. Ngesikhathi sokugeza okushisayo, uthele uviniga omncane we-apula cider bese uphefumula phezu kwamaphunga alo. Engeza insipho enomsoco noma i-foam emanzini bese ulala embhedeni okwesikhashana.
Uma unomkhuhlane noma u-bronchitis, ungafaka amafutha e-lavender, noma i-rosemary, ebhodini, amaconsi angu-2-6 azongela. Yenza itiye lakho eliyintandokazi, liye lamanzi, bese uthatha futhi uthele isigamu sendebe ebhodini, kanti enye ingxenye yetiye engeza uju nokuphuza.
Ukugeza okuphumuzayo ngaphambi kokulala.
Impumuzo ephumuzayo, ephumuzayo inikezwa yi-melissa ne-lavender. Kuyasiza ukuphumuza nokukhulula ukucindezeleka kokugeza usawoti nolwandle. Emva kokugeza, uphuze itiye nobisi, ukulala kwakho kuyoba namandla.
Kunganconywa kulabo abanezifo ezingavamile, izidakamizwa, i-psoriasis noma i-eczema. Ama-iodine, okuyingxenye kasawoti inomphumela wokulwa nokuvuvukala nokubulala amagciwane. I-bromine ikhulula iphinde ifise.
Thatha amaminithi angu-2-3 kasawoti bese uphelela emanzini, bese ufaka ama-5-6 amaconsi amafutha abalulekile. Ziyizikhuthazo ezinamandla zezitshalo, ukusiza ukuxazulula izinkinga ezihlukahlukene zesikhumba kanye nezifo eziningi ezingapheli ziletha impumuzo.
Bhati nge cellulite.
Faka amaconsi ama-5 amafutha omvu obomvu noma ama-grapefruit ekugeza, futhi ngesikhumba esomile, i-rose yamafutha iyasiza kakhulu. Izindawo zezinkinga zesikhumba esilula futhi uzama ukuphumula ngokuphelele ekugeza.
Bath okuvela ezinkampanini zokuvuvukala kanye nokwelapha.
Amafutha omzimba asusa ingcindezi yengqondo-ngokomzwelo futhi ephazamisekile, aphakamisa isikhumba, akhuthaze ukuphulukiswa kwamanxeba esikhumbeni. Uma othile ehlushwa izifo zesikhumba nge-dermatitis noma i-eczema, ijwayele ukugula, bese udinga ukumisa ekudleni kwamakhemikhali. Ngezinqubo zokuvuvukala, izibhuku ezenziwe ngama-birch efihlekile namaqabunga ziyasiza.
Bhati kulabo abanomjikelezo ophukile wokuya esikhathini.
Emibhalweni ka-Aristotle, umphumela wokuphulukisa we-oregano ovamile uchazwa, uma kukhona ukungalungi emjikelezweni wokuya esikhathini kanye ne-neuroses ehlukahlukene. Ithuthukisa inhlalakahle jikelele futhi ivuselele. Yenza ukumnika okwebusuku, okuthatha ama-gramu angu-200 wamakhambi, engeza ama-3 amalitha amanzi, ubilise amaminithi angu-10-15, bese uthele ekungcoleni okugeza, ulale kuwo. Futhi injabulo yakho izodlulela, futhi ngeke kube khona ukulandelwa kwesokunxele kubo. I-Bath izoba nomthelela wokuphulukisa futhi omuhle, iyasiza ngezifo eziningi nezifo eziningi. Indlela enhle yokuba yedwa futhi uphumule.
Manje uyakwazi ukugeza kahle ukuze ujabulele futhi uzuze. Sithemba, izeluleko zethu zizokusiza.
Kungenzeka yini ukwandisa amabele ekhaya
I-liposuction yezintambo: izinkomba, ukuphikisana, isisekelo senqubo, izinkinga
Siqeda imibimbi entanyeni: ama-creams, ama-masks nama-exercises
Ukuvuselelwa nge-hyaluronic acid
Isibindi sesibindi emanzini okugeza
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - owesifazane-ingonyama - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Ukukhetha ifenisha yezingane
Ukudoba Ngothando: khetha ukugqoka komshado okwesibhakabhaka
Imikhiqizo ethuthukisa umbono
Ungashintsha kanjani umyeni wakhe?
Uphinde ubaba osemncane: UMel Gibson uzoba uyise ngesikhathi sesishiyagalolunye
Isitayela se-deconstructionism yangaphakathi
Uphaya nge ushizi kanye neek
U-Andrey Jedzhula nomkakhe umculi uSanta
Duck ngesiShayina nge noodle nemifino